Ogaden News Agency (ONA) – Yasser al-Jumayli iyo Waajibkiisii Ugu Dambeeyay ( The Last assignment) : Daawo
Yasser al-Jumayli iyo Waajibkiisii Ugu Dambeeyay ( The Last assignment) : Daawo
Posted by ONA Admin	/ January 19, 2015
Waxaa laga daawaday shalay barnaamij aad u cajiib ah oo sawirqaade u dhashay dalka Ciraaq uu ka diyaariyay dagaalka ka socda dalka Suuriye, markuu soo dhameystay muhimadiisii uu ku waayay naftiisa oo gaadhigii waday intii lagala soo dagay madaxa laga toogtay.
Bishii November 2013 ayuu Sawir-qaade Iskii u shaqaysta (Freelance) uu ka galay dalka Suuriya dhaka Turkiga. Yaasir waxaa la socday wariyaha lagu magacaabo Jumca Al-Qaasim, oo ka sheekaynaya siday hawshaa u qabteen iyo habka loo dilay. Wuxuu sheegay sidaad ka arki doontaan filimka inay kolba gobolka ay u gudbayaan kooxda haysata ay ka qaadanayeen ogolaalnsho ay ku dhex maraan kuna sawiraan hawlaha iyo dagaalada ay kula jiraan cadawgooda.
Ugu dambayntii markay go’aansadeen inay kasoo baxaan 4tii December 2013 ayaa waxaa gaadhigii ay saarnaayeen la joojiyay, ka dibna waxaa lagala dagay sawir-qaade Yaasir Al-Jumayle oo meel u dhow lagu toogtay.
Kuwaa toogtay waxay ugu talagaleen inuusan filimkan kasoo bixin Suuriya, waxayna ka mid tahay nidaamka ay adeegsadaan xukuumadaha gacanta kula jira dhiiga dadweynaha aan waxba galabsan iyo falalka xuquuqda aadanaha kasoo horjeeda ee hadana doonaya inay caalamka usoo bandhigaan been aan jirin. Waana habka ay Itobiya ula dhaqanto wariyayaasha caalamiga ah markay ku aragto gudaha Ogadenya. Waxaynu xasuusanaa wixii ku dhacay wariyihii ka socday NYT Mr. Jeffrey Gentlemen ama labadii awriye ee u dhashay dalka Sweden ee shirqoolka beenta ah ay u sameeyeen.
Taasoo jirta ayay hadana waxay noqdaan Ku-Dayasho (Icon) wariyayaashaa u badheedhay khatarta marka la daawado ama la arko xaqiiqada caalamka la rabay in laga qariyo.
Filimkan wuxuu si fiican kuu fahamsiinayaa dagaalka ay ku jiraan saxifiyiinta iyo siduu caalamka ugu baahan yahay qof sida Yaasir oo kale ah.